Fikarohana momba ny firaisana Ny Trangam-panjakan'ny Zafikelin'i Charles Thomson | Ralph Nader - Fikarohana momba ny vatana teraka
Hita taratra amin'ny: Torolalana ho an'ny Fanahy na ny Fanahy Ahtun avy amin'ny alalan'ny Kevin Ryerson
Tranga notadiavin'ny Walter Semkiw, MD
Article by Walter Semkiw, MD avy ateraka indray
Tamin'ny taona 2001 dia nikaroka fikambanana iray aho izay toa navaozina tamin'ny vanim-potoana ankehitriny avy amin'ny Revolisiona Amerikana. Amin'ny ankapobeny dia efa nihevitra aho fa efa ela ny andian-dalan'i Bill Clinton, Al Gore sy Geroge W. Bush, izay nandray anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena 2000. Ralph Nader dia mpirotsaka ho an'ny filoham-pirenena Amerikana 2000 koa ary raha miezaka ny hiverenan'ny hafa indray ny vahoaka, dia ahiahiko fa i Nader dia azo inoana koa fa nandray anjara tamin'ny Revolisiona Amerikana, na dia tsy azoko an-tsaina aza hoe iza izy no mety.
Tao amin'ny fivoriana iray niaraka tamin'i Kevin Ryerson, nanontany an'i Ahtun Re aho raha toa i Nader dia nanjavona nandritra izany fotoana izany ary raha izany, iza izy. Ahtun Re nanamarina fa velona i Nader tamin'ny taonjato faha-18 ary ny anarany dia Thomson na Thomason. Ahtun Re dia nilaza tamiko fa mpilalao lehibe ao amin'ny Kongresy Continental ary Ahtun Re dia nanambara fa hahita an'i Thomson ihany koa ireo manana endrika manesoeso toa an'i Ralph Nader.
Tany am-boalohany aho dia tezitra tamin'ny fametrahana vaovao momba an'i Thomson tao amin'ny boky sy loharano hafa izay nangoniko tamin'ny Revolisiona Amerikana. Fotoan-dehibe ny fotoana, toy ny nanaovako sonia fifanarahana amin'ny boky, Fiverenan'ny revolisionera, ny 30 2001 tamin'ny XNUMX tamin'ny Oktobra, izay nahaterahan'i John Adams, ary ny fe-potoan'ny famoaham-bokiko momba ny faneken'ny boky dia nanakaiky haingana.
Nanapa-kevitra ny hanolotra ny trangan'i Nader ho fanandramana farany aho amin'ny fitsidihana ny Tranombokim-bahoaka San Francisco. Nankany amin'ny fizarana mikasika ny tantara amerikana aho momba ny Kongresy Continental sy ny fivoriambe momba ny Lalàmpanorenana, izay ahitana bokim-boky telo lehibe lehibe. Nandao ny endriky ny tsirairay aho, nanantena fa hahita an'i Thomson, na Thomason.
Rehefa avy namakivaky boky avo zato aho na tsy nahomby, dia nanomboka nihena ny fanantenako. Tampoka teo, tao anaty boky mainty lehibe iray, izay tsy dia nipoitra nandritra ny taona maro, dia nahita ny anaran'i Charles Thomson tao amin'ny fanondroana, miaraka amin'ny portrait izay mamaritra ny mari-pejy. Mety izany ve no notadiaviko? Rehefa nitodika tamin'ilay pejy tamin'ny sarin'i Charles Thomson aho dia nahita ny endrik'i Ralph Nader, miaraka amin'ny boriboriny mahavariana sy ny tsipika maranitra maromaro amin'ny lafiny iray, mitovitovy amin'ny endrika Thomson.
Nandritra ny fivoriana nanaraka an'i Kevin Ryerson dia nanamafy i Ahtun Re fa i Charles Thomson dia i Ralph Nader ao amin'ny Era Revolisionera. Ankoatry ny fananana trano fandraisam-bahinin'ny endriky ny endriky ny tarehiko, dia hitako fa ny toetra mampiavaka an'i Thomson sy Nader dia toa tsy dia misy dikany loatra. Samy mpiaro ny mpanjifa izy ireo, samy niady ho an'ny mpiambina, ary samy heverina ho toy ny radika loatra izy roa ireo mba ho voafidy amin'ny biraony.
In Fiverenan'ny revolisionera, Nanokana toko iray manontolo momba ny Thomson | aho Ny tranga naterak'i Nader, izay ampitahako ny teny notsongaina avy amin'ny asa soratr'i Thomson sy Nader, mampiseho ny maha-zava-dehibe ny soatoaviny sy ny eritreriny. Ity tranga ity dia tena manan-danja lalina ho ahy, satria nasehony fa ny Ahtun Re dia toa hita fa manana fahafahana mametraka ny mombamomba ny fiainana taloha.
Endrika ivelany: I Charles Thomson sy Ralph Nader dia manana trano fambolena.
Fiainana Taloha: Nader naneho ny talenta sy ny filalaovan'i Thamson tahaka an'i Thomson ho lasa mpisolovava, mpisolovava mpanjifa, mpanavao sy mpitarika politika.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Araka ny voatanisa ao amin'ny Fiverenan'ny Revolisiona, amin'izao fotoana izao, Ralph Nader dia tafaraka indray amin'ny mpiara-miasa amin'ny Revolisiona Amerikana izay navaozina tany amin'ny sehatra politikan'ny fifidianana filoham-pirenena 2000.